Cannabidiol (CBD) - Orinasa mpamatsy mpanamboatra
Cannabidiol (CBD) dia fitambarana voajanahary hita ao amin'ny voninkazo mararin'ny rongony, zavamaniry manana tantara manankarena toy ny fanafody miverina an'arivony taona maro. Androany ny toetra ara-pahasalamana ao amin'ny CBD dia notsapaina ary nohamafisin'ireo mpahay siansa sy dokotera manerantany. Fitaovana azo antoka sy tsy mampiankin-doha, CBD dia iray amin'ireo "fitokannabinoid" mihoatra ny zato, izay tsy manam-paharoa amin'ny rongony ary manome ny mombamomba azy amin'ny mombamomba ny fitsaboana azy.
Fampahalalana momba ny fotodrafitrasa simika
anarana Cannabidiol (CBD)
fahadiovana Manokana mitokana 99% mitokana / Extrapure (CBD≥99.5%）
Anarana simika CANNABIDIOL
Synonyms CBD; C07578; Menaka CBD; Crystal kristaly; CANNABIDIOL; CBD Manokana; (1r-trans) -; vovoka CBD 99%; CBD, CANNABIDIOL; (-) - CANNABIDIOL
Teboka mitsonika 62-63 ° C
Bika Aman 'endrika Vovoka kristaly fotsy mavo sy mazava
Antsasak'aina 18-32 ora
Solubility Soluble ao anaty menaka, mety levona be ao amin'ny étanol sy methanol, tsy mety levona anaty rano
Storage Condition Ny mari-pana ao amin'ny efitrano, ataovy maina sy tsy ho maivana
fampiharana Ho an'ny fikarohana siantifika ihany, na ho toy ny akora ilaina amin'ny fampivoarana ny vokatra any ambany, na amidy any amin'ny firenena sy faritra ara-dalàna any ivelany. Aza adino ireo vokatra ireo dia tsy tokony holaniana mivantana na ampiasaina amin'ny fitsaboana klinika any amin'ny tanibe Shina
Cannabidiol (CBD) vovoka 13956-29-1 Famaritana ankapobeny
Cannabidiol [CBD] no singa lehibe tsy psychotropika amin'ny volo glandular an'ny Cannabis sativa. Mampiseho be dia be ny hetsika ao anatin'izany ny anticonvulsive, sedative, hypnotic, antypsychotic, ary anti-milaza zavatra ary fananana neuroprotective. Izy io dia phyto-cannabinoid lehibe, mitaky hatramin'ny 40% ny nalaina avy amin'ny zavamaniry rongony, izay mifamatotra amin'ny tanjona kendrena ara-batana maro karazana ny rafitra endocannabinoid ao anatin'ny vatana. Na dia eo aza ny famotopotorana ny tena fiantraikan'ny fitsaboana amin'izao fotoana izao, ny CBD dia nampiseho fampanantenana ho lasibatra fanafody fitsaboana sy fanafody. Manokana, ny CBD dia naneho fampanantenana ho toy ny analgesic, anticonvulsant, miala sasatra hozatra, tebiteby, antipsychotic ary naneho ny hetsika neuroprotective, anti-inflammatoire ary antioxidant, ankoatry ny fampiasana hafa ankehitriny.
Ny CBD dia mifamatotra akaiky amin'ny fitambarana fanafody iray hafa manan-danja: tetrahydrocannabinol (THC), ny fitambarana izay mahatonga ny haavo malaza amin'ny rongony. Ireo no singa roa amin'ny rongony izay nodinihin'ny mpahay siansa indrindra.
Na ny CBD na ny THC dia samy manana ny toetra mampiavaka ny fitsaboana. Saingy tsy toy ny THC, ny CBD dia tsy mahatonga ny olona hahatsapa ho “toraham-bato” na mamo. Izany dia satria ny CBD sy ny THC dia mihetsika amin'ny fomba samihafa amin'ny mpandray isan-karazany ao amin'ny ati-doha sy vatana.
Ny CBD dia tena afaka mampihena na manala ny vokan'ny psychoactive an'ny THC, arakaraka ny habetsaky ny fangaro tsirairay no lany. Betsaka ny olona maniry ny tombontsoa azo avy amin'ny rongony raha tsy misy avo - na kely noho ny avo. Ny zava-misy fa ny CBD mahery vaika amin'ny fitsaboana ary tsy mamo, ary mora raisina toy ny menaka CBD, dia nahatonga azy io ho safidy fitsaboana manintona ho an'ireo izay mitandrina amin'ny fanandramana rongony voalohany.
Ny ezaka hanokanana ireo akora mavitrika amin'ny rongony dia natao tamin'ny taonjato faha-19. Cannabidiol dia nianatra tamin'ny 1940 avy tao amin'ny hemp liar tany Minnesota sy ny resina indianina Cannabis indica. Ny raika simika an'ny CBD dia natolotra tamin'ny fomba iray hanokanana azy amin'ny hemp dia. Ny firafiny sy ny stereokimiaziny dia voafaritra tamin'ny 1963.
Cannabidiol misy vokany eo amin'ny ati-doha. Ny antony marina mahatonga ireo vokatra ireo dia tsy mazava. Na izany aza, ny cannabidiol dia toa manakana ny famotehana zavatra simika ao amin'ny ati-doha izay misy fiantraikany amin'ny fanaintainana, ny toe-po ary ny fiasan'ny saina. Ny fisorohana ny famotehana an'io simika io sy ny fampitomboana ny haavony ao amin'ny ra dia toa mampihena ny soritr'aretina psychotic mifandraika amin'ny toe-javatra toy ny schizophrenia. Cannabidiol dia mety hanakana ny sasany amin'ireo vokatry ny psychoactive an'ny delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Ary koa, ny cannabidiol dia toa mampihena ny fanaintainana sy ny fanahiana.
Analgesic ary anti-milaza zavatra: Cannabidiol dia afaka mamokatra vokan'ny analgesic. Ny rafitra ara-panafody an'ny analgesia dia mifandraika indrindra amin'ny mpandray CB1 sy CB2. Ireo mpitsabo CB1 dia mahatratra ny vokatry ny analgesic amin'ny alàlan'ny fanakanana mivantana ny famoahana ny asidra gamma-aminobutyric, ny volondavenona ary ny RVM (GABA), ary ny glutamate ao amin'ny tadin'ny hazondamosina amin'ny periaquapular.
Ny neurotransmitter an'ny GABA ao amin'ny ati-dohan'olombelona dia misy vokany mampitony, manakana ny fientanam-po ao amin'ny foiben'ny ati-doha.
Endocannabinoids dia zava-dehibe amin'ny vatana izay manampy ny mararin'ny fahaketrahana hampihena ny fitaintainanana. Cannabidiol dia manampy amin'ny fitazonana ny endocannabinoids amin'ny ambaratonga mety, hahatonga ny marary hahatsapa ho tsara sy faly, fa ny marary kosa tsy hamaly an'ity vovo-tany CBD ity.
Cannabidiol (CBD) vovoka 13956-29-1 Fikarohana bebe kokoa
Ny fikarohana momba ny fampiasana hafa ho an'ny cannabidiol dia misy fikorontanan'ny neurolojia maromaro, saingy ny valiny dia tsy voamarina mba hametrahana fampiasana toy izany amin'ny fampiharana ara-pahasalamana. Tamin'ny volana oktobra 2019, ny FDA dia namoaka fampitandremana fampitandremana fa ny vokatry ny CBD mandritra ny fitondrana vohoka na fampinonoana dia tsy fantatra, izay manondro fa ny fiarovana, fatra, fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina na sakafo hafa, ary ny voka-dratsin'ny CBD dia tsy voafaritra ara-pitsaboana, ary mety hiteraka a loza mety hitranga amin'ny reny sy ny zaza.
Betsaka ny fanambarana natao ho tombontsoan'ny fitsaboana cannabidiol izay tsy tohanan'ny porofo marim-pototra. Ny fanambarana sasany - ohatra, ny cannabidiol dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana homamiadana - latsaka ao amin'ny sehatry ny pseudoscience.
Tamin'ny taona 2020, ny marika ho an'ny Epidiolex any Etazonia dia nitarina mba hampidirina amin'ny fitsaboana ny aretim-pako mifandraika amin'ny tuberous sclerosis complex.
"Fitsipika FDA momba ny vokatra azo avy amin'ny rongony sy rongony, ao anatin'izany ny Cannabidiol (CBD) (General)". Fitantanana ny sakafo sy zava-mahadomelina amerikana (FDA). 22 janoary 2021. Hita tamin'ny 14 aprily 2021.
Campos AC, Moreira FA, Gomes FV, ​​Del Bel EA, Guimarães FS (Desambra 2012). "Mekanisma marobe tafiditra amin'ny mety ho fitsaboana cannabidiol amin'ny aretin-tsaina marobe amin'ny aretin-tsaina". Fifanakalozana filozofika an'ny Royal Society of London. Andiany B, Siansa biolojika (Famerenana). 367 (1607): 3364–
Izgelov D, Davidson E, Barasch D, Regev A, Domb AJ, Hoffman A.Fanadihadiana momba ny fanafody am-bava cannabidiol synthetic amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo salama. Eur J Pharm Biopharm. 2020; 154: 108-115.
Gurley BJ, Murphy TP, Gul W, Walker LA, ElSohly M. Votoatiny mifanohitra amin'ny fitakiana an'i Label ao Cannabidiol (CBD) -Misy vokatra azo avy amin'ny toeram-pivarotana any amin'ny fanjakan'i Mississippi. J Diet Suppl. 2020; 17: 599-607.
Be the first to review "Cannabidiol (CBD)" hanafoana ny valin-
Amino Tadalafil Suciumic Acid Sodium Powder
Orlistat vovoka (96829-58-2)